Inter-Vlan Routing with Multilayer Switch Tshoot လုပ်ရာမှာ – Cisco Training
Inter-Vlan Routing with Multilayer Switch Tshoot လုပ်ရာမှာ
May 14, 2015 January 15, 2016 IP6 Networks
Broadcast Domain Size ဟာ LAN Network အတွက် စိန်ခေါ်စရာတခုပါပဲ။ Broadcast Size
က်ုလျော့ချပေးမယ့် VLANs ဆိုကလည်းပါလာစမြဲ။ သူနဲ့အတူ Intet-Vlan Routing ဆိုတာလဲ ပါလာရပြီပေါ့။ CCNA, CCNP Switch လေလာဖြေဆိုသူများအနေဖြင့်လဲ လေလာရမည့် သင်ခန်းစာတခုဖြစ်ပါတယ်။့ 
မတူညီတဲ့ VLANs တွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရာမှာ Layer3Function Device ကိုအသုးံပြုချိတ်ဆက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ Router နဲ့ Multilayer Switch နှစ်မျိုးရှိရာမှ Layer3Switch ခေါ် Multilayer Switch နဲ့ Configure and Troubleshooting ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်နိုင်ဖို့ပါ။
အများအားဖြင့် Tshoot လုပ်ရာမှာ
ပြန်ကြည့်ရင် စတင်လေ့လာသူတော်တော်များများဟာ ဘာကို ရှာရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကပျောက်နေပ့တယ်။ ဘာကိုရှာရ ကြည့်ရမယ်သိပြန်တော့လည်း အသုံးများဆုံးကတော့ show running-config နဲ့ပဲ ပြန်ပြန်ရှာရတာအကျင့်ဖြစ်နေတက်ပါတယ်။
Technology ရဲ့ Verfication Command နဲ့မှပိုမိုတိကျပြီး ပိုမိုမြန်ဆန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်ရင် ဘာမရတာ စသဖြင့် Concept ကိုသေချာနားလည်ဖို့လိုလာပြန်ပါတယ်။ အဲတော့ မှတ်ရလွယ်အောင်အဆင့်လေးတွေလုပ်လိုက်ပါမယ် L3Switch နဲ့ အိုကေရင် Router နဲ့ Verification and Troubleshooting ကလွယ်ကူသွားပါပြီ။
L3 Switch အတွက် Inter-Vlan Routing လုပ်ဖို့ အဆင့်လေးဆင့်ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။
1) L3 Switch ဟာ Default အရ Layer2Function သာအလုပ်လုပ်နေလို့ Layer3Function ဖွင့်ပေးရပါမယ်။ Config Command က ip routing ပါ။ Verification ကတော့ Show running ကအလွယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ip routing ဆိုပြီးပြောမှ show ip route ခေါ်တဲ့အခါ Routing Table လဲပေါ်လာမှာပေါ။
2) Route လုပ်ပေးမယ့် VLANs တွေ creat လုပ်ပေးရပါမယ်။ ဥပမာ Vlan 10 , Vlan 20 ပါ။ Network ထဲက Switch တွေမှာ Vlan Name တွေနာမည်တူစရာမလိုပေမယ့် တူတူပေးထားခြင်းကသာ ယုတ်တိရှိပါတယ်။ Tshoot လည်းလွယ်တာပေါ့။ show vlan brief နဲ့ ကအကောင်းဆုံးပါပဲ။
3) Config လုပ်ထားတဲ့ VLANs တွေထဲ VLANs အတွင်းရှိတဲ့ PC တွေရဲ့ Gateway IP Setting သက်မှတ်ပေးရပါမယ်။ PC တွေရဲ့ Gateway ပေါ့ဗျာ။
ip add 192.168.10.254 255.255.255.0 ပါ။
No shutdown မလိုပါဘူး။ show ip int brief ကနေပြီး ip ပေးထားတာမှန်မမှန်နဲ့
interface status တွေ up ဖြစ်မဖြစ် စစ်ပါမယ်။
4) Switch to Switch ချိတ်ထားတဲ့ Interface ဟာ Trunking ဖြစ်ရပါမယ်။ တခြား switch နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ interface ထဲဝင်ပြီး အဲဒီ interface ကိုပဲ Trunk လုပ်ရမှာပါ။
switchport mode trunk ဆိုပြီး Trunk ဖြစ်စေပါတယ်။
show int trunk ကသူ့ရဲ့ verification ပါ။
အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် Multilayer Switch တွင်
1. Opening Routing Function with IP Routing command ==> show running-config
2. Creating VLANs ==> show vlan brief
3. Assigning IP Setting for VLANs ==> show ip int brief
4. Creating Trunk Link ==> show interface trunk
လက်တွေ့ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး Packet Tracer လေးနဲ့ Lab လုပ်ကြပါစို့။
Switch(config)# hostname Sw-1
Sw-1(config)# vlan 10
Sw-1(config-vlan)# name Sales
Sw-1(config-vlan)# vlan 20
Sw-1(config-vlan)# name Marketing
Sw-1(config-vlan)# int fa0/1
Sw-1(config-if)# switchport access vlan 10
Sw-1(config-if)# int fa0/2
Sw-1(config-if)# int fa0/24
Switch(config)# hostname Multi-Sw
Multi-Sw(config)# ip routing
Multi-Sw(config)# vlan 10
Multi-Sw(config-vlan)# name Sales
Multi-Sw(config-vlan)# vlan 20
Multi-Sw(config-vlan)# name Marketing
Multi-Sw(config-vlan)# int vlan 10
Multi-Sw(config-if)# ip add 192.168.10.254 255.255.255.0
Multi-Sw(config-if)# int vlan 20
Multi-Sw(config-if)# ip add 192.168.20.254 255.255.255.0
Multi-Sw(config-if)# int fa0/1
Multi-Sw(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Multi-Sw(config-if)# switchport mode trunk
PC 1 ကနေ Default Gateway ဖြစ်တဲ့ 192.168.10.254 ကို Ping မမိဘူဆိုပါစို့။
1) ကိုယ့် PC IP Setting မှန်မမှန်
PC IP Setting ကမှန်ပါတယ်။ ဒါဆို
2) PC ကတခြား VLAN ထဲရောက်နေလို့။ PC 1 ရဲ့ Port ကတခြား VLAN ထဲရောက်နေတာ။
VLAN မှန်တယ်။ ဒါဆို
3) Uplink ဖြစ်တဲ့ Port က Trunking မဖြစ်တာ
Trunking ဖြစ်တယ်။ ဒါဆို
4) L3 Switch မှာ Vlan IP setting မှားတာ
IP Settingမှန်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါဆိုရင်
5) Multilayer Switch မှာ Vlan Interface Status Down နေတာ။
ဒါဆို VLAN Creat မလုပ်ရသေးလို့။
ဒါဆိုရင်တော့ Gateway ကို ဆက်သွယ်လို့ရပြပေါ့။
6) ip routing ဆိုပြီး Layer3Function ဖွင့်ပေးဖို့မေ့နေတက်တယ်
ဒါဆို PC2ကလဲ အဆင့်ဆင့်စစ်ဆေးသွားရင် PC 1 နဲ့ PC2ဟာ အချင်းချင်း PING ရဲ့ Reply ဆိုတာလေးကို တွေ့ရပြီပေါ့။
Lab များကို Practice လုပ်တဲ့အခါမှာ အကြိမ်ရေဘယ်လောက်လဲဆိုတာ
CCNA CCNA, Networking Leaveacomment
← Ping အကြောင်းတစေ့တစောင်း
RIP Basic Configuration →